Baqdinta Bixitaanka Kenya ee Kismaayo!! (Faallo) « AYAAMO TV
Baqdinta Bixitaanka Kenya ee Kismaayo!! (Faallo)
by Maamule sare
418 Views Date January 27th, 2014 time 9:59 am
Ciidamada ka socda Dalka Kenya ayaa Sanadihii u dambeeyay ku sugnaa Magaalada Kismaayo ee Gobalka Jubada Hoose, iyagoo halkaas kusoo galay Weerar ay kaga awood roonaadeen Shabaab.
Weerarka Kenyanku soo qaadeen wuxuu ahaa mid Muddo dheerba Dhabbaha kusoo jiray oo marba Deegaan soo gaarayay, illaa ugu dambeyntii uu Magaalada Kismaayo soo Cag dhigtay, halkaas oo ahayd Bartilmaameedkiisa ugu muhiimsan.
Kenya oo soo galisteedii Soomaaliya ee u horeysay aan wax Qorshe la wada ogyahay ku socon ayaa mar dambe shaacisay inay ku biirtay Ciidanka AMISOM ee Shabaab la diriraya.
Maliishiyaad Soomaali ah oo ka tirsanaa Jabhad la yiraa Raas-Kambooni ayaa Ciidamada Ood-wadaag kula ahaa Weerarka, halka Askar yar oo Dowladda Soomaaliya magaceeda watana ay iyaguna Safka kula jireen.
Laakin markii Magaalada Kismaayo la yimid, ayaa Awoodii Maamulka ee Magaalada waxay u Gacan gashay Maliishiyadii Raas-Kambooni oo Ciidanka Kenya ay kaabayaan, Dagaalo Maamulka Salka ku haya ayaana Maliishiyadaas iyo Soomaalidii kale ee Hubka sidatay oo Magaalada ku sugnaa dhex maray.
Waxaa iminka Kismaayo ka taliya Maamul la magac baxay Jubba oo la rumeysanyahay in Awoodiisa ugu wayni ay leeyihiin Raggii Jabhadda Raas-Kambooni, Gudoomiyaha Maamulkanina waa Hogaamiyihii Jabhadda ee Axmed Madoobe.
Maalmahan waxaa soo baxay Warar sheegaya in Kismaayo laga saarayo oo la bedelayo Ciidamada Kenya ee Garabka iyo Gaashaanka u ahaa Jabhadii hore ee Raas-Kambooni iyo Maamulka iminka ee Jubba.
Askar Dalka Sierra Leon ka imaanaysa ayaa sida Qorshuhu yahay bedelaysa kuwii Kenya ee Howlgalka AMISOM.
Tan iyo markii Warkanu uu soo baxay ayaa waxaa Kismaayo ka socday Guux ballaaran oo u muuqda Walwal laga qabo arrintan hadii ay dhacdo, waxaana inta badan Walwalkanu uu ka dhex jiraa Mas’uuliyiinta Maamulka Jubba iyo Taageerayaashooda.
Dibadbax ayaa Maalin ka hor Kismaayo ka dhacay, Dadkii ka qayb galayna waxay ku qaylinayeen Hal ku dhigyo ay ku taageerayaan Kenya iyo joogisteeda Kismaayo.
Balse Dad badan oo Xog ogaal ah ayaa Dibadbaxan ku sheegay mid Siyaasadeed oo Bandhig beenaad ah, Dadweyne la iskusoo uruuriyay oo aan Go’aankooda ku soconinna la iskusoo uruuriyay oo si hoose wax loogu sheegay.
Afhayeen u hadlay Maamulka Jubba oo la yiraa Cabdinaasir Seeraar ayaa isna Warfidiyeenka uga waramay bixitaanka Kenya iyo sida ay u arkaan, isagoo xusay in Ciidanka Kenya ay yihiin kuwo Anshax wanaagsan oo Dadka Kismaayo caawiya.
Seeraar ayaa Daqiiqado badan oo intuu hadlayay ka mid ah ku bixiyay amaan iyo sheegsheeg uu kor ugu qaadayo Sumcadda iyo wax-tarka uu rumeysanyahay inay Ciidanka Kenya u leeyihiin Jubooyinka.
Wuxuu Afhayeenku intaas raaciyay in Askar kale oo kuwa Kenya lagu badalo aanay sahlanayn inay la qabsadaan Deegaanka amaba ay Wada shaqayn la yeeshaan Maamulka uu isagu Afkiisa ku hadlayo ee halkaas ka jira.
Sida uu Afhayeenkani u hadlay iyo Dibadbaxii lagu tilmaamay Bandhig Siyaasadeedka waxay Labaduba muujinayaan Baqdin uu Maamulka Kismaayo ka qabo bixitaanka Kenya, waxaysa Dadka Siyaasadda u Dhuun daloola rumeysanyihiin in bedelka Ciidanka Kenya aanu wax badan oo saameyn ah ku yeelan doonin Amniga Deegaanka, maadaama Ciidamo kale oo AMISOM ah Booskooda la gelin doono.